Translations by Ye Wint Kyaw in “Burmese (my) translation of deb...” : Burmese (my) : Template “debian-installer” : Zesty (17.04) : Translations : debian-installer package : Ubuntu
Translations by Ye Wint Kyaw
Translations by Ye Wint Kyaw in “Burm...
Ye Wint Kyaw has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.
မှတ်ဥာဏ်ကိုချွေတာရန် ထည့်သွင်းခြင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများကိုသာ ပုံမှန်အနေဖြင့်ရွေးချယ်ထားပါသည်။ အခြားအစိတ်အပိုင်းများမှာ အခြေခံအဆင့်ထည့်သွင်းခြင်းအတွက် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် kernel modulesကဲ့သို့သော အချို့အစိတ်အပိုင်းများကို သင်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် အစိတ်အပိုင်းစာရင်းတွင် သေချာစွာစစ်ဆေး၍ လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းကို ရွေးချယ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ရွေးချယ်ထားသော ဘာသာစကားဖြင့် ထည့်သွင်းခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါက စကားလုံးအများစုသည် မှန်ကန်စွာဖော်ပြနေမည်။ သို့သော် အထူးသဖြင့် သင်သည်အခြားသော ပို၍အဆင့်မြင့်သည့် ထည့်သွင်းခြင်းအဆင့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါက တချို့သောစကားလုံးများသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြနေမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ရွေးချယ်ထားသော ဘာသာစကားဖြင့် ထည့်သွင်းခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါက စကားလုံးအများစုသည် မှန်ကန်စွာဖော်ပြနေမည်။ သို့သော် အထူးသဖြင့် သင်သည်အခြားသော ပို၍အဆင့်မြင့်သည့် ထည့်သွင်းခြင်းအဆင့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါက တချို့သောစကားလုံးများသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ဖော်ပြကောင်းဖော်ပြနေမည်ဖြစ်သည်။